नेपालमा दैनिक कति हुन्छ अक्सिजन उत्पादन ? - Khabarshala नेपालमा दैनिक कति हुन्छ अक्सिजन उत्पादन ? - Khabarshala
नेपालमा दैनिक कति हुन्छ अक्सिजन उत्पादन ?
काठमाडौं– दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएसँगै आम नागरिकले अक्सिजन पनि पाइने हो कि हैन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको चपेटमा रहेको भारतमा अक्सिजन सपोर्ट नपाउँदा संक्रमितको ज्यान गइरहेको अवस्थामा नेपालमा समेत मेडिकल अक्सिजनको उपलब्धताको विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको हो।
अध्यक्ष शारडाका अनुसार कोरोना संक्रमितको सपोर्टका लागि प्रयोग हुने अक्सिजनका सिलिण्डर धोएर तथा पूर्ण रुपमा सेनिटाइज गरेर पुन: प्रयोगमा ल्याइन्छ। स्वास्थ्य खबरबाट